Xukuumada siilayo shaqo la’aan bay abuurtay By: Abdirahman Dualle | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Xukuumada siilayo shaqo la’aan bay abuurtay By: Abdirahman Dualle
Xukuumada siilayo shaqo la’aan bay abuurtay By: Abdirahman Dualle
Posted by admin on February 19th, 2012 07:46 AM | FADHIGA SUBULAHA
Xukuumada silaayo musuqmaasuqu meel aanu welikii gaadhin ayuu marayaa waa kuumad wada dilaal ah, waxay ka xishoonaysana jirto maxaa yeelay mudada ay xukun ka haysay xukuumada silaayo waxay ku caan noqotay qandaraasyo debeda lagu soo dhamaysto oo shaqsi ama group ah.
Waxaa la yidhi mayd maxaa ugu dembeeyey iyo kaa lasiisido. Labada madaar ee Hargeisa iyo Berbera waxaa u tartamay 11 shirkadood. Oo ajanebi iyo wadani isuku jira. Waxaana lasiiyey laba shirkadood oo ajanebi ah oo qiimaha laga hooseeyey.
Miyaanay nasiib daro marka ahayn in shaqo muwadinku qaban karo lasiiyo ajanebi. Nin xoog lehba bisinbaa bi iyey, musuqmaasiqa xukuumada siilaanyo ayaa mowaadin xuquudiisiba bi isay, Boqolkiiba 80 qandaraasyada dalka laga fuliyaa ma maraan dariiqa sharciga ah. Waa musuqmaasuq iyo qabyaalad aan gabasho lahayn ayaa lagu bixiyaa. Waagii hore waxaynu maqli jiray ama xukumadihii hore lagu sheegi jiray musuqmaasuq laakin xukuumada siilaanyo qabyaaladbay iyo qandaraasyo dalka debediisa lagu soo dhamaysto ayey dheeraatay.
Waxaana taa ku cadayna in debeda lagu soo dhamaystay wasiirku Maxamuud xashi maalintii uu la shiray shirkadaha dhismaha ee ka qayb kalay qandaraaska ayuu u sheegay inuu madaarka Hargeisa siinayo shirkad ajanebi ah. Haddan debeda lagu soo dhamay qandaraaskiiba lama furine sideebuu ku ogaaday wasiirku?
Taasina waxay meesha ka saartay Waajibaadkeedii ahaa inay muwaadiniinta xuquudooda u ilaaliso, oo ay shaqo u abuurtaa. Lakiin waxaa wax laga naxo ah iyada oo lawada ogyahy shaqala’aanta haysta shacabka reer Somaliland in shaqaadoodii la siiyo shirkado ajanebi ah. Muwaadinka maxaa la kudboon marka ay taasoo kale dhacdo. muwaadinka waxaala gudboon inuu xuquuqdiisa ilaashado oo aanu sinaba u ogolaan in shaqo uu qaban karo la siiyo ajanebi.
Xakuumada kidaar taar lagu werijinayo iy guri la dhisayo ajanibi siisay waxba uma soo sido shacabkii doortay. Muwadin kastaba wuxuu leeyahay (rights & respossibility) musauuliyada dalkiisa ka saran iyo xuquuda uu asiku ku leeyahy. Xuquuqda u leeyahay waxa ka mid ah inuu helo tacliin,caafimaad, shaqo intuba waa masuuliyad saran xukuumada. Bal ka waran marka ay xukuumadi shaqadoodii siiso ajanebi soo in shacabku baqdiyo loguma tala gelin.wuxuu yidhi (markii horaba anigoo ooyaya ayey ceesaani ugu joogsatay), iyadoo dalka shaqo la’aani ka jirto oo boqolkiiba 75% anay shaqayn in dad ajanebiya shaqo la siiyaa waa waa muwaadinka xuquudiis oo la duudsiyey. Dalku inta uu ku socdaa waa private sector ayuu ku dhaqdhaqaaqayaa ee hadii intiina la curyaamiyo waxa ka dembay doona cawaacib xumo. Oo sidaynu wada ognahay dal waxaa curyaamiyaa waa laba shay oo kale ah sicir barar iyo shaqo la’aan.
Sanadkiiba 200 ilaa 300 oo arday ah ayaa jaamicada dalka ka soo baxa oo suuqa taagan. Waxa qudha ee caawin jiray wuxuu ahaa (private sectors).
Hadaba waxaanu leenahay xukuumada siilaanyo ha waantoodo musuqmaasuqa iyo qandaraasyada debede lagu soo dhamaysanayo.
« Xawaalada Amoud Express oo shir balaadhan ku qabanaysa Wadanka Holland
M/Kuxigeenka JSL Mudane Saylici oo tacsi udiraya eheladii marxuum C/casiis Cumar Siciid oo ahaa Gudomiye Kuxigenka Gobolka Sanaag »